β-Phenylethylamine HCL ntụ ntụ (156-28-5) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Nootropics ntụ ntụ / β-Phenylethylamine HCL ntụ ntụ
SKU: 156-28-5. Category: Nootropics ntụ ntụ
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkwa nke β-Phenylethylamine HCL (156-28-5), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ka ike gị dị ike ma lekwasị anya, ị ga-enwe mmasị na otu β-Phenylethylamine ntụ ntụ ọrụ. A makwaara dịka 'ịhụnanya-molecule' na kemịkal maka 'onye na-agba ọsọ', phenylethylamine ntụ ntụ bụ ụbụrụ kachasị ike nke na-akpali akpali.
β-Phenylethylamine HCL akpụkpọ vidiyo
Ụdị β-Phenylethylamine HCL bụ isi ihe dị iche iche
aha: β-Phenylethylamine HCL ntụ ntụ
Molekụla Formula: C8H12ClN
Ọbara arọ: 157.64
Nchekwa Nche: RM
β-Phenylethylamine HCL ntụ ntụ na ojiji
PEA, Beta-β-Phenylethylamine HCL ntụ ntụ ma ọ bụ 2-β-Phenylethylamine HCL ntụ ntụ.
2-β-Phenylethylamine HCL ntụ ntụ Usage
2-β-Phenylethylamine HCL ntụ ntụ bụ nnu nnu nke 2-β-Phenylethylamine ntụ ntụ. Ụdị a na-eme ka ọ dịkwuo ike na ịnweta. Dabere na akụkọ na ahụmahụ ndị ọkachamara, na nchọpụta a kpaara ókè, ụdị ọgwụ ntanetị 2-β-Phenylethylamine HCL a na-atụ aro ya bụ na 100 - 500 mg otu ugboro ugboro atọ kwa ụbọchị. Ị nwere ike iwepụta ọgwụ ntụpọ 2-β-Phenylethylamine HCL n'ụtụtụ, tupu mmega ahụ, ma ọ bụ n'ebe ọbụla na ịchọrọ ike ọzọ.
Enwere uru nke Phenylethylamine hcl
A. Ọsọ ọsọ, ike dị ike dị ukwuu ruo oge 1-2
B.Ọdịdị Mgbanwe nke nwere ike ịkwụsị ọtụtụ awa
C.Inyocha na ntachi obi
Ị nwere ike iwere PEA ọtụtụ ugboro n'otu ụbọchị. E nwere ụzọ dị iche iche ị ga-esi were ntụ ntụ Phenylethylamine HCL. Iwere ya na nro (n'okpuru ire) ga-eme ka ọ banye n'ọbara gị ngwa ngwa. I nwekwara ike iwere PEA na mmiri ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ.
Otú Phenylethylamine HCL nwere ike isi mụbaa
E nwere usoro ihe omumu nke na-emepụta Phenylethylamine HCL. The PEA 'precursor' bụ amino acid a na-akpọ phenylalanine. Ndị nwere ịda mbà n'obi na ADHD nwere ala karịa ọkwa nkịtị nke ntụ ntụ Phenylethylamine HCL. Ndị ọkà mmụta sayensị kwenyere na ndị ọkà mmụta ihe omimi nwere oke nke PEA.
Ahụ anyị na-achịkwa ọkwa Phenylethylamine HCL kpam kpam n'ihi na ọ bụ ihe dị mkpa neurotransmitter. Nke a bụ ihe mere anyị ji emetụ PEA na ọnụego dị otú ahụ. Ọ gaghị ekwe omume ịbanye n'ime ụzọ ndụ gị ma gwa ozu gị ka ịmepụta PEA ọzọ. Otú ọ dị, a na-ahụ mmega ahụ nkịtị na njikọta mmekọrịta dị mma iji mụbaa ọkwa PEA dị mma.
Esi eme ka β-Phenylethylamine HCL kpoo uzuzu
β-Phenylethylamine HCL uzuzu agbajila (metabolized) site na enzymes a na-akpọ MAOs. Imechi ndị MAO ndị a na-enye ohere ka ure-β-Phenylethylamine HCL na-adịgide adịgide ruo ogologo oge, ma mee ka ị nwee ekele maka ike a n'ụzọ zuru ezu. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị MAO-inhibitors (MAOI) nwere ike ịdị nnọọ ize ndụ ma nwee ọtụtụ mkparịta ụka.
MAOI kachasị nchebe bụ ndị mmechi MAO-B. Ndị a na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na ole na ole n'ime enzymes MAO. Ha dị nnọọ nchebe karịa MAO-Ndị na-emechi ya ma ka ga-eme ka ọrụ ure-β-Phenylethylamine HCL dị ogologo karịa oge (ruo 5 awa).
Ị nwere ike imechi mgbochi metabolism site na iji mgbatị Hordenine. A na-amị Hordenine site na mkpụrụ osisi Orange Bitter Orange, ma ọ bụ akụkụ MAO-B (ọ na-egbochi na a ga-eme ka PEA ghara inwe nkwarụ). Hordenine na-arụpụta ọtụtụ uru ndị ọzọ dị mkpa ahụ ike. Iburu β-Phenylethylamine HCL na ntụpọ na Hordenine bụ nnukwu ume ike. Ndị ọzọ MAOI ndị ọzọ gụnyere nutmeg, turmeric, na kava.
Ịdọ aka ná ntị na ntụ ntụ β-Phenylethylamine HCL
E nwere ọtụtụ usoro dị iche iche nke ime ihe maka PEA mgbe ọ na-abanye na mgbochi ụbụrụ ọbara na-abanye n'ime usoro nhụjuanya nke etiti.
Otu n'ime ihe mbụ ọ na-eme bụ iji nyere aka na ntọhapụ nke b-endorphin nke bụ peptide opioid bụ nke bụ isi na-akpata ọtụtụ ihe ụtọ.
Ọ na-egosiputa mmetụta nke mgbe mgbe mgbe ịda mbà n'obi ma ọ bụ ọmịiko site na-akpali akpali ịhapụ ọtụtụ dopamine na norepinephrine.
Ọ bụghị nanị na-akpali ntọhapụ nke dopamine, kamakwa ọ na-egbochi ntiwapụ nke dopamine, na-amụbawanye ogo ya.
E kwenyere na PEA nyere aka kpalie ntọhapụ Acetylcholine, ụbụrụ ụbụrụ dị ike na neurotransmitter. Chemical a na-arụ ọrụ dị oké mkpa n'ọtụtụ ọrụ ụbụrụ dị iche iche gụnyere nchekwa, mmụta, ncheta, nlebara anya, na ntụgharị uche.
β-Phenylethylamine HCL ntụ ntụ bụ neurotransmitter. Ọ bụ otu n'ime ndị ntanetransite kachasị emetụta ya site na mmetụta nke ọ dị na ụbụrụ gị. β-Phenylethylamine HCL ntụsi na-akpali mmepụta nke adrenaline, dopamine, na serotonin. Ọ dị irè na ọkwa ndị na-arịwanye elu nke catecholamines, nke bụ ndị na-ahụ maka ntanetrị nke gụnyere epinephrine (adrenaline) na norepinephrine. Nke a bụ otú β-Phenylethylamine HCL si eme ka ị nwee mmetụ dị mma, ike, na ilekwasị anya.
Ọzọkwa, β-Phenylethylamine HCL ntụsi na-eme ka mmepụta dopamine na serotonin (nwayọọly). Mmiri homonụ abụọ a bụ ndị na-achịkwa ọnọdụ ọnọdụ dị oke mkpa ma bụrụ ihe mere mmepụta ntụ ntụ β-Phenylethylamine HCL ji eme ka obi dịkwuo gị mma!
Otu n'ime uru kachasị uru nke mgbakwunye a bụ na ọ nwere ike ime ka ọnọdụ gị dịkwuo mma ma kpughee mmetụta nke ọdịmma gị. Nke a pụrụ ịdị oké egwu inyere ndị chere na nchekasị, nchegbu, na ikekwe na-ata ahụhụ site na ịda mbà n'obi.
Mmetụta ndị a dị ka ọ bụ n'ihi nkwụsị nke b-endorphin na dopamine, onye na-ahụ maka nyocha nke na-emetụta ọnọdụ na ije. N'eziokwu, a na-ejikarị mmezi a eme ihe dị ka ihe na-enye aka n'ịgwọ nchegbu na ịda mbà n'obi.
Ọ na-emekwa ka ọbara mgbali elu na ọkwa glucose ọbara, na-ebute ọkwa dị elu. Nke a nwere ike inye aka belata mmetụta nke ike ọgwụgwụ nke na-esochi ọnọdụ ndị dịka ịda mbà n'obi ma ọ bụ ndị nkụzi.
E nwekwara ọtụtụ nsogbu Nootropic metụtara ude-β-Phenylethylamine HCL. Nke a dị ka ọ bụ n'ihi mmetụ ahụ na-akpali akpali nakwa dị ka mmetụ nke Acetylcholine.
Ugo elu nke neurotransmitter Acetylcholine meziwanye ebe nchekwa ma mee ka o nwekwuo ngwa ngwa n'iweghachi ihe nchekwa. Ị nwere ike iche na ị nwere ohere dị omimi iji cheta echekwa ma ghara ịchọ ịchọ njikọ dị mkpa ka ha na-abata n'ihu uche gị ozugbo.
Ọtụtụ ndị ọrụ na-akọkwa mmụba n'ọmụmụ ihe na nlebara anya ka mma ma ọ bụ ogologo oge. Nke a na-agụnye ikike ka mma ilekwasị anya na itinye uche. N'ebe ụfọdụ, a na-ejikọta uru ndị a site na nghọta dị egwu, dịka ọhụhụ na ụda.
kedu β-Phenylethylamine HCL powder hclDue maka ntọhapụ nke ọgwụ ndị a dị ike, tinyere mmụba nke ọbara mgbali na ọkwa glucose ọbara, enwere ihe akaebe siri ike na-egosi na PEA nwere ike inye aka mee ngwa ngwa.
Nke a pụtakwara na ọ nwere ike iduga ụba ọkụ ọkụ. E nwere ọtụtụ ihe oriri na ihe ndị na-abaghị uru dị ugbu a n'ahịa ndị na-agụnye PEA dịka otu n'ime isi ihe ha na-eme.
E nwekwara ọtụtụ ogige ọgwụ ndị a na-akpọkarị β-Phenylethylamine HCL powders. Ha niile na-adabere na ngwugwu siri ike nke PEA, ya na ihe ọ bụla ejiri ma ọ bụ gbanwee.
A na-eji ihe ndị a eme ihe dị ka ọgwụ akparamàgwà mmadụ na-agụnye MDMA (ecstasy). Ha na-enwekwa ọgwụgwọ dị iche iche na ndị na-eri nri, ndị na-egbochi ọrịa, na ọgwụgwọ maka ụkwara ume ọkụ.
β-Phenylethylamine hcl Nkọ ntụ ntụ
Otu esi zụta β-Phenylethylamine HCL ntụ ntụ si AASraw
β-Phenylethylamine hcl Ntụ ntụ ntụ ntụ ntụ
1 nyochaa maka β-Phenylethylamine HCL ntụ ntụ
β-Phenylethylamine HCL ntụ ntụ bụ ihe ọmụma
Nootropics ntụ ntụ (15)
Ọla abụba (17)
ndị ọzọ na- (15)
Eplerenone ntụ ntụ (107724-20-9)